အသားအရည်အတွက် ဗိုက်တာမင်စီ ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ???? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အသားအရည်အတွက် ဗိုက်တာမင်စီ ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ????
???? အသားအရည်အတွက် ဗိုက်တာမင်စီ ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ????
လူ့တန်ဖိုးနဲ့ အလှတရားကို အရေပြားတစ်ထောက်စာနဲ့ အကဲမဖြတ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အပေါ်ယံအရေပြားထက် အတွင်းစိတ်အလှတရားနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကသာ အဓိကလို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးမြင်ရတာက အရေပြားဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှာ လှပတင့်တယ်နေဖို့တင်မကဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို လုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ရာသီဥတုဒဏ် ရောဂါပိုးမွှားဒဏ်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အသားအရည်ရဲ့ကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်ခြင်းကို သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်လှပါတယ်။
?အသားအရည်ကောင်းဖို့ Vitamin C ဘာလို့လိုတာလဲ ??
ပုံမှန်လူ့အရေပြားမှာ Vitamin C ပါဝင်ပြီး အသားအရည်အတွက် အဓိကအလုပ်နှစ်ခု တာဝန်ယူပေးပါတယ်။
▪ပထမတာဝန်ကတော့ အသားအရည် ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Collagen ထုတ်လုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ လှပတင်းရင်းတဲ့ အသားအရည်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆို Collagen မပါလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ Vitamin C ကလည်း တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါပြီး မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေရပါတယ်။
▪ဒုတိယတာဝန်ကတော့ Viamin C ရဲ့ Antioxident property လိုခေါ်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုဂုဏ်သတ္တိကို အစွမ်းပြရတဲ့ တာဝန်ပေါ့။ နေရောင်ခြည်မှာပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်(UV)တွေဟာ အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အထိတောင် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရည်ပျက်စီးမှုကို Vitamin C က antioxident protection လုပ်ရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အသားအရည်အတွက်တင်မကပါဘူး။ ဆဲလ်တွေကို သေစေပြီး ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမဲ့..အအိုမြန်စေမဲ့ Free Radicals ဆိုတာတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း Vitamin C ရဲ့ ဒီဂုဏ်သတ္တိနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
?Vitamin C ချို့တဲ့လာရင် ဘာဖြစ်မလဲ ??
အိုမင်းလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် နေရောင်ကြောင့် အသားအရည်ပျက်စီးလာတဲ့အခါ အရေပြားမှာ Vitamin C ချို့တဲ့လာတတ်ပါတယ်။ Vitamin C ချို့တဲ့လာတာကို Scurvy လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရေပြားက နည်းနည်းထိရုံနဲ့ ထိခိုက်လွယ်လာပြီး သွားဖုံးသွေးယိုတာ ဆံသားပျက်စီးတာတွေလည်း တွဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အနာတစ်ခုဖြစ်ရင်လည်း ကျက်ဖို့နှေးသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ပါ အားနည်းလာတဲ့အတွက် အရေပြားပေါ်က ပိုးမွှားတွေတင်မက တခြားရောဂါတွေကိုပါ လက်ယပ်ခေါ်နေသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
▪အချုပ်ဆိုရရင်တော့ Vitamin C ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိနဲ့ အာနိသင်တွေကို အသုံးချပြီး ခုဆိုရင် အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ Vitamin C ကိုပါ ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Vitamin C ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ဓာတ်စာတွေနဲ့ ဆေးတွေလောက် ထိရောက်မှုရှိမရှိကို သက်သေပြနိုင်ဖို့တော့ သုတေသနတွေ လိုနေပါသေးတယ်။
အားလုံး အသားအရည်ရဲ့ ကောင်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ..